“Ma sheegan, mana ihi anigu Al-Shabaab” Wariye Cawaale Jaamac Salaad. – Radio Daljir
“Ma sheegan, mana ihi anigu Al-Shabaab” Wariye Cawaale Jaamac Salaad.
Europe, Sept 17 – Waxaan aad uga xumahay Maalmihii danbe inay jiraan Xarumo Warabaahin oo aan lagu tilmami karin kuwo Daacad iyo Xirfad Saxafadeed ku shaqeeya inay qorayeen oo ay buun buuniyeen been qaawan oo iyagu ay sameeyeen islamarkaasna qof kasta oo caqli leh ama aniga aqoon ii leh uusan qaadan karin.
Ilaa iyo hada waxaan ku wareersanahay waxaan ku micneeyo warkan isaga ah sababta ay u abuureen dhalinyaro saxafiyiin sheeganyesa weliba ay ii huwinayaan dembiyo waaweyn oo aan wax lug ah ku lahayn, ma fahmin ujeedkooda qaarkoo markii iigu danbeeysay sxb ayaan ahayn xaqiiq.
Hadaba anigoo ah Cawaale Jaamac Salaad, ahna Saxafi Soomaliyeed waxaan canbaareynayaa dhalinyarada iyo bogaga wararkaasi qoray, waxana u sheegayaa in war lagu qoray website ay dhici karto inay akhristaan hal beel ama mid caalami ah inaan ku noqon karin anig waxaana ahayn.
Qof kastaba waxaa wanaagsan inuu ogaado inaan dusha loo saari karin dembi uusan lahayn maantana aduunka la isaga war hayo sida hal xaafad oo la ogyahay qofkii dembiile ah.
Wararka iyo Maqaalada la daabacyo waxa haboon in la hubiyo sugnaashahooda, aniga markii aan dabogal sameeyay, waxaan soo ogaaday in qoraaladaas laga diray cinwaan Hotmail.com ah oo Magacayga lagu sameeyay qof kastana halakasi laga la hadlaayey.
Lakiin arrinka iga sii yaabiyay ayaa ah Websityo wararkaasi kadib soo daabacay Faalooyin iyo warar kale oo aniga igu saabsan kuwasoo xaqiiq ka dhigaya warkii hore lakiin waxa meesha ka muuqata cadowtooyadu inay iska badantahay.
Waxaa iskay tusay in dhalinyaradan aysan ku jirin wax damiir Islaanimo ah iyo mid Soomalinimo, waayo waxay caqligooda ka keeneen in qof kale oo walaalo yihiin ay dusha ka saraan dembi uusan lahayn.
Aniga waxaan jeclahay Nabadda Soomaaliya iyo in Dawlad Mideysan dalka uu yeesho; sidoo kale waxaan jeclahay Nabada iyo Horumarka Puntland waxaana ku qanacsanahy Nidaamka hada ka jira Puntland iyo sida ay wax u wadaaan.
Aniga shaqsi ahaan ma ihi siyaasi oo hadba qolo taageraya waxaana ahayn nin dhalinyaro ah oo iminka dalka aan joogin kuna sugun wadmada Reer Galbeedka oo waxbarasho ku jira; nin hawlahaasi u soo jeeda ma ihi, damacna igama hayo Al Shabaab iyo Dawlad midna inaan ka mid noqdo, waxa keli ah oo aan ku haminayaa shaqadayda sidii aan u sii wadan lahaa oo xirfadayda u haajin lahaaa.